सरकारले देशलाई विखण्डनतर्फ धकेल्ने प्रयास गर्दैछ : उपेन्द्र यादव | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
२६ जेठ, २०७३-
छ महिनाको मधेस आन्दोलन, सिंहदरबार र बालुवाटार घेराउपछि संघीय गठबन्धनले आज जेठ २५ गते मंगलबारदेखि रिले अनशन सुरु गरेको छ। असार मसान्तसम्मको रिले अनशनपछि सरकारले वास्ता गरेन भने के हुन्छ ? यही र यस्तै जिज्ञासासाथ गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवसँग रातोपाटीका लागि एसके यादव र विधान श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश:
मधेसमा ६ महिना आन्दोलन गरिसकेपछि आजदेखि रिलेअनशन सुरु गर्नुभएको छ, यसले के सन्देश दिन चाहेको हो ?
–राज्यको नश्लवादी सोचका कारण यस्तो भयो । राज्य आफंै साम्प्रदायी छ र उल्टै भन्छ– मधेसमा साम्प्रदायीक आन्दोलन भयो । विखण्डनकारी आन्दोलन भयो तर अहिले आएर त्यसको पनि खण्डन भयो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरे पनि भावनात्मक रूपमा एकीकरण गर्न सकेका थिएनन् । तर, हामीले गरेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले नेपालीलाई भावनात्मक रूपमा पनि जोड्यो । यो देशमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ । भावनात्मक एकताको आवश्यकता छ । यो एकताको काम हामीले गर्र्र्दै छौं। तर, सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । सरकारे गैरजिम्मेवारीमात्रै होइन, उसलाई थाहा छैन कि देशमा के भइरहेको छ ।
यो सरकारले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गर्दै विखण्डनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । हुन त जुन देशमा अतिवादी कम्युनिस्ट आए ती देश विखण्डन भएका छन् । चेकोस्लोभाकिया पनि त्यहाँका कम्युनिस्टका कारण विखण्डन भएको हो । युगोस्लाभियामा पनि जनताको आवाज सुनिदिएको भए विखण्डन हुने थिएन । धेरै मुलुकमा यस्तो भएको छ । राज्यले एकल जातीय नश्लवादी पोषण गर्दै अन्यको पहिचान समाप्त पार्दै छन् । अरू केही पनि होइन । आफू नै सबैथोक भन्दै अरूको पहिचान बेवास्ता गर्ने काम राज्यबाट भएको छ, जुन नश्लवादी सोच हो । र, त्यही सोचको संविधान पनि बन्यो । यसले गर्दा विध्वंश निम्त्याउने काम गरेको छ । सरकारले देशलाई विखण्डनतर्फ धकेल्ने प्रयास गर्दैछ ।
रिले अनशनले त्यो बाटो रोकिन्छ त ?
–हुन्छ । यदि राज्यले कुनै पनि समुदायलाई आजको युगमा दास बनाएर राख्न चाह्यो भने विद्रोह हुन्छ नै । किनभने आजका युगका मान्छे वा समुदाय दास बनेर बस्न चाहँदैन । अहिलेको यो अवस्थामा पुर्याउने काम यो देशका कम्युनिस्टले गरेका छन् । त्यसबाट जोगाउनका लागि हामी लडिरेहका छां । यो मुलुकलाई सम्बोधन गरिएन भने यसको भविष्य छैन ।
छापामार शैलीमा गठबन्धनको संयोजक बन्नुभयो रे भन्ने आरोप छ नि ?
Posted by admin on Jun72016. Filed under Breaking News, अन्तरवार्ता, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
1 Comment for “सरकारले देशलाई विखण्डनतर्फ धकेल्ने प्रयास गर्दैछ : उपेन्द्र यादव”
July 25, 2016 - 8:35 am